Umhlahlandlela Wokuzala Inja Yomalusi we-Anatolian: Konke Odinga Ukukwazi - Izinhlobo
Umhlahlandlela Wokuzala Inja Yomalusi we-Anatolian: Konke Odinga Ukukwazi
UMalusi wase-Anatolian mhlawumbe ungomunye wabo inja endala kunazo zonke , futhi nokho kusengenye yezinto ezingakaze zizwakale.
Kodwa-ke, lo mqondo wokungaziwa awuzange ubavimbe ekungeneleni ezimpilweni zethu ngisho kwizikrini zethu zethelevishini .
Yaqala ukubonwa eminyakeni eyizinkulungwane eyedlule, le canine yokufuduka yathathwa njengesipho esikhulu senani elingachazeki esasetshenziswa ngokomlando ukugcinwa komhlambi.
Inja yakwa-Anatolian Shepherd iyifanele kahle imindeni enolwazi, enezingane ezindala, ezinesikhala esiningi sokuzivumela ukuba zizulazule.
Kusukela ekuzivocavoca kuya ekuzilungiseni, le ndatshana iyisiqondisi esibanzi sakho konke odinga ukukwazi ngalolu hlobo. Ake siqale ...
Ukubuka konke kwenja yomalusi we-Anatolian
Ukwamukelwa kweKennel Club kanye nozalo
Imidlwane yakwa-Anatolian Shepherd
I-Anatolian Shepherd Temperament
Usayizi Womalusi we-Anatolian, Ukubukeka Nokuzilungisa
Umalusi oyi-Anatolian uyinja yohlobo lweMastiff kusuka esifundeni se-Anatolia eTurkey.
Kucatshangwa ukuthi baqala ukubonwa eminyakeni engaba ngu-6 000 eyedlule endaweni manje eyaziwa ngokuthi iTurkey futhi bevela ezinjeni zasendulo zaseMesopotamiya.
Kuqale ukubonwa ngaphandle kwempumalanga yeYurophu ngawo-1970, ngenkathi eyodwa ingeniswa e-United Kingdom ngumbhali uCharmian Hussey, bangeniswa eMelika ngesikhathi esifanayo.
Ukuthandwa kuka-Anatolian Shepherd kwakhula ngenxa ye- Umthetho Wezinhlobo Ezisengozini (1973) okwakwenza kwaba semthethweni ukubulala izilwane ezidla imfuyo, ngakho-ke abalimi baqala ukusebenzisa izinja njengezithibelo ezifundeni zabo.
Ama-Anatolians angama-canine anamathalente amaningi; kanye nokwenza umlingani omuhle nenja esebenzayo, futhi bahle kakhulu emfuyweni nasemisebenzini yokugada.
Kusukela ngo-1994, i- I-Anatolian Shepherd isetshenziswe ngabalimi e-Afrika njengesithiyo samakati amakhulu anjengeCheetahs!
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi kuze kube muva nje, inja yaseKangal Kukholakala ukuthi luhlobo olwehluke ngokuphelele enjeni yakwa-Anatolian Shepherd.
Ukuhlolwa kofuzo ekuqaleni kwekhulu lama-21, nokuhlolwa komlando wezinhlobo zombili, kukhombisa ukuthi empeleni baluhlobo olufanayo! Kodwa-ke, ngaphansi kokuhlukaniswa kweklabhu yokuzalanisa, baziwa ngokuzimela njengoKangal Shepherds.
Abalimi baseTurkey baqala ukukhulisa le canine ukuvikela imfuyo yabo, ngenxa yalokhu baziwa njengezinja ezinakekela imfuyo.
Abanye abalimi basasebenzisa le canine ekwaluseni nasekunakekeleni namuhla. Iqembu elincane lezinja ze-Anatolian Shepherd zikwazi kalula ukuvikela umhlambi wazo kuzimpisi, ama-coyotes nakwezinye izilwane ezingaba yingozi.
Lokhu kungaba yinto okufanele ikhunjulwe lapho ucabanga ngokuzibandakanya kohlobo ukuze ube isilwane somndeni, futhi ukukhuthaza ubudlelwane obuhle nabantu ongabazi kungaba lusizo empilweni yamuva.
Kusukela ngo-1999, u-Anatolian Shepherd ubelokhu eyilungu le-American Kennel Club futhi njengamanje babalwa njengohlobo lwama-90 oludume kakhulu.
Umalusi we-Anatolian Breed Info
Usayizi 29-32 ″ (owesilisa) no-28-31 ″ (owesifazane)
Isisindo Amakhilogremu ayi-110 kuye kwayi-150 (owesilisa) namakhilogremu angama-90 kuye kwayi-120 (abesifazane)
Isikhathi sokuphila Iminyaka 8-12
Inhloso Inja Eyelusa Imizulane
Ifanele i- Yazi Abanikazi Bezinja
Ukuhluka Kwemibala White, Cream, Sesame noPiebald
Isimo Ezizimele, Zokuzivikela, Ezinobuhlakani, Ezinesiqiniseko futhi Ezipholile
Amanye Amagama Karabash
Thola Okuningi Ngemfuyo kanye Nezinja Zomlondolozi! Landa ikhophi yamahhala yesiqondisi sethu sokuthenga le nja .
Umdlwane we-Anatolian Shepherd uzobiza phakathi kuka- $ 800 kuya ku- $ 1,500 USD.
Kodwa-ke, le canine iyinhlobo engajwayelekile ikakhulukazi, ngakho-ke ukuthola umdlwane ongenacala kusuka kumfuyi onomthwalo wemfanelo kungaba okuthile okuyinselele!
Ungasebenzisa futhi imakethe yaseKennel Club, noma izinhlangano ezithile zokutakula ukuthola ukutakula kwe-Anatolian Shepherd.
Ngezansi kukhona ishadi lokukhula elilinganiselwe lale midlwane emikhulu. Ngenkathi ukuphambuka okuncane kokujwayelekile kungeyona into ongakhathazeka ngayo, ukwahlukahluka okukhulu noma ukwehluka okuvela kokujwayelekile kungaba yimbangela yokukhathazeka.
Izinyanga ezi-3 40-60
Izinyanga eziyi-6 80-100 70-90
Izinyanga eziyi-9 100-120 80-100
Izinyanga eziyi-12 110-150 90-120
I-Anatolian yaseTurkey ifinyelela ekuvuthweni kwenye indawo phakathi kwezinyanga eziyi-18 nezingama-30.
UMalusi wase-Anatolian akaziwa ukuba nothando ngokukhethekile , esikhundleni salokho bakhetha ukuzimela futhi bazinakekele.
Ngokwesiko lolu hlobo luzozizingela, ngakho-ke ngokwemvelo bathanda ukuzinakekela ngaphandle kokusekelwa okuningi okuvela kubaninizo.
Yize bengenalo uthando lwangaphandle, baziwa kanjalo i-canine eqotho kakhulu .
Njengomphumela wefa labo, lolu hlobo lwaziwa ukuthi luvikela kakhulu imindeni yabo, abangayithatha njengomhlambi wabo.
Lokhu kuvikela kubenza izinja eziqaphile kakhulu ngenxa yokubukeka kwabo okusabisayo nobumnene babo.
Abelusi be-Anatolian baziwa kabi ngabanikazi babo ngamagxolo abo aphansi futhi anomsindo omkhulu. Lokhu ngokomlando kwakusetshenziswa ngokukhululekile ebusuku, noma uma bethola umhlaseli (into okufanele icatshangelwe labo abanomakhelwane).
Lezi zinja zikhona ezimele futhi ezihlakaniphile , akuzona ezokuhaga kakhulu nothando.
Ngenkathi bathanda abaninizo, imvamisa lezi zinja zijabula ngokwazo.
Uma zihlangana kahle, zivikela abanikazi bazo ngendlela emangalisayo, kepha ziqhelelene nabantu ongabazi, futhi azijwayele ukufudumala kubantu abasha kalula.
Lokhu kunganqandwa ngandlela thile ngokuvezwa, kepha lolu hlobo luvame ukusethwa ngezindlela zazo lapho selufinyelele ekuvuthweni.
Akudlalwa kakhulu, lezi zinja azijwayele ukuzibandakanya emidlalweni, kunalokho zikhetha ukuchitha isikhathi sazo sokulala noma ngokucophelela belusa umhlambi wabo .
Abelusi be-Anatolian bangaba nobungane nezinye izinja inqobo nje uma bethola ukuzibandakanya okuningi besebancane.
Njengoba bayinja egadayo , bathambekele ekuhlalisaneni kahle nezingane, bezibheka njengengxenye yomhlambi wabo okufanele zivikelwe.
Okubi kakhulu, bazobekezelela izingane futhi esimweni esihle kakhulu bazozibandakanya ngokudlala, noma kunjalo, le canine ayizibandakanyi nokudlala kakhulu. Ngakho-ke uma ufuna inja ethanda ukudlala futhi ekhombisa uthando, zama i-Goldendoodle .
Lolu hlobo aluhambisani kahle nezinye izilwane ezifuywayo zasekhaya.
Bangase babe nobunzima uma isihambi noma isilwane esilahlekile sizulazula nasendaweni yaso.
Ngenxa yalokhu, kungcono ukuhamba nabo ngaphandle kwezikhathi ezimatasa ngomzamo wokugwema isehlakalo. Okuningi kulokhu kamuva.
Lo Melusi uhlobo olukhulu, olunesisindo esiphakathi kuka-90 kuya ku-150lb ngokwesilinganiso.
Umalusi oyi-Anatolian incazelo yohlobo olukhulu lwenja .
Uma sebekhulile, laba bangane abanoboya bame phakathi kwama-intshi angama-28 no-32 ubude futhi banesisindo esiphakathi kuka-90 no-150 lb.
I-Anatolian yaseTurkey ayinzima ukuyibona, inokubukeka okuhluke kakhulu.
Imidondoshiya emnene, le canine enkulu ifakwe imisipha kahle ngokulingana, nokugeleza okugelezayo.
Banobuso obucishe bube ngunxande nezifinyila, izindlebe eziyizicaba nezingunxantathu ezinentamo yobude obuphakathi nomgqomo onjengemizimba.
Isisho sabo siphapheme, sihlale sibheke izinkinga.
Ama-Anatolians azoba namehlo ansundu noma amnyama, njengoba amehlo aluhlaza okwesibhakabhaka noma amehlo e-bicolor ethathwa njengokuchezuka ezingeni lokufuya.
Inja ye-Anatolian Shepherd ingabonakala ngemibala eminingi, kepha ukwehluka okuvame kakhulu yile:
Izingubo zikaPiebald zimhlophe, nanoma yiziphi izindawo ezinemibala ezingathathi ngaphezulu kwezingama-30% zezingubo zezinja.
Umalusi oyi-Anatolian inejazi elimbili elithambile .
Iyashelela kwezinye izindawo futhi inzima kwezinye. Kufanele ibe phakathi kwamayintshi ayi-1 kuye kwayi-4 ubude, ibe mfushane ezingxenyeni ezibushelelezi futhi ibe yinde ezingxenyeni ezinzima.
Abanikazi balo Malusi babachaza njengabacishe babe nakho umhlwenga wengonyama entanyeni yabo ngoboya obude obuzungeze isikhunta sentamo yabo kudala ukubonakala kwemane okwengonyama.
Ngeshwa, le canine iyi ayifanele abagulayo bokungezwani komzimba njengoba aziwa njengonyaka wonke, ama-sheddi asindayo.
Ukuxubha isonto ngalinye kuzokwanela, uma inja yakho izovumela izikhathi zokuxubha.
Kabili ngonyaka, la ma-canine azoba 'nokushaywa umoya' lapho ezokhipha khona iningi loboya bawo futhi akhule emajazini awo esizini. Ngalezi zikhathi zokuchithwa kwesizini, bazodinga ukuzilungisa nsuku zonke.
Izipikili zizodinga ukusikwa njalo ngumqaphi noma udokotela wezilwane njalo emasontweni ayisithupha.
Kwezinye izingxenye zomhlaba, i-Anatolian Shepherd isasetshenziswa njengenja yokwalusa.
I-Anatolian ilungele kangcono abanikazi abanolwazi ekuphatheni izinja ezinkulu / ezinkulu.
Futhi benza kahle emakhaya anenqwaba yomhlaba, njengoba engenzi kahle emakhaya amancane.
Ngokwemvelo, ngenxa ye- indima yabo yokuqapha umhlambi , inja yakwa-Anatolian Shepherd ihamba amamayela nsuku zonke, ngakho-ke babezobhekana nobunzima efulethini elingaphakathi nedolobha.
Umhlahlandlela Amakholori ayi-1,200
Abelusi be-Anatolian ababona abadlayo!
Uma nje begcwala nsuku zonke, bazodla cishe noma yini. Lokhu kuza ngenxa yokuthi abanikazi babo abayimizulane bayabondla noma yini abangayithola ngenkathi bezulazula e-Anatolian Peninsula.
Ngokufanelekile, laba bangane abanoboya kufanele bondliwe izinkomishi ezintathu (noma amanani alinganayo) usuku ngalunye.
Ukudla kufanele kuhlukaniswe kabili: ekuseni nakusihlwa.
Uma ukhetha ukondla i-kibble eyomile, qiniseka ukuthi inokuqukethwe kwenyama. Ngokufanelekile, inyama kufanele ibe sezakhiweni zokuqala ezintathu ekupakisheni.
Uma i-Anatolian yakho ingangumlingani osebenzayo, ungahle ufise ukubaklomelisa ngokuphatha. Kunconywa ukuthi udlise ukudla okulula okunempilo kunokuphikisana namakhompiyutha.
Ukuvuza ngezithelo nemifino kungagcina izikhathi zokudla zithakazelisa futhi zibe mnandi.
Naphezu kobukhulu bayo obukhulu, le nja ayidingi ukuzivocavoca okuningi.
Ukuhamba kabili kwansuku zonke, ihora ngalinye ngesikhathi kufanele kube ngokwanele ngalesi sidlakela esimnene .
Bajwayele ukuqaphela futhi beme kakhulu nabantu abangabazi, ngakho-ke ukuhamba ngezikhathi ezithulile zosuku kuyazuzisa.
Ungamangali uma uMalusi wakho we-Anatolian engajahi izinduku noma amabhola ngenkathi ehamba. Njengomphumela wefa labo, izinja zalolu hlobo zithanda kakhulu ukunyuka, ukuhamba noma ukubhukuda phezu kwemidlalo yokulanda.
Bayinzalo yezinja eziyimizulane ezazihamba amakhilomitha usuku ngalunye. Ngenxa yalokho, ngenkathi uhamba uhambahamba, kungasiza ukugcina inja yakho iqhubekile ukuzivikela ekuhambeni kwazo futhi zingabuyi.
Ukuvumela i-canine yakho ibe yindawo ebiyelwe evikelekile kungabasiza bashise amandla angaphandle. Kodwa-ke, ukuqinisekisa ukuthi indawo ibiyelwe ngokuvikelekile kuyisidingo ngoba zinganyamalala ngaphezulu noma ngaphansi kwayo uma zibona ukuthi kunengozi.
Yize kuliqiniso ukuthi abantu base-Anatoliya bayinja ethembekile futhi ehlakaniphile, baziwa futhi ukuthi banenkani ngokweqile futhi bathanda kakhulu.
Ukuzimela kwabo kubenza babe mancane amathuba okwenza lokho okuceliwe kubo, bazomane bakhethe ukungakwenzi uma benikezwa ukukhetha.
Ngenxa yalokho, ukuqeqeshwa kuvame ukuba yinto esetshenziswayo.
Ukuqala ukuqeqeshwa kwakho ngosuku abeza ngalo ekhaya kuzosiza ekukhuthazeni ukufunda futhi kumise ukuqhela okungavela empilweni yakamuva. Nokho, le nja akuyona i-canine yendabuko ngubani ozojabula ngokufunda amaqhinga weqhinga.
Lapho beqeqeshwa, abanikazi badinga ukuqina nokuzethemba ngemiyalo.
Abakwa-Anatolians abaphenduli ukujabulisa futhi bayabonga, badinga umnikazi abangamkhomba njengomholi wabo. Lokhu akusho ukumemeza noma udlame. Esikhundleni salokho, sebenzisa izwi elinenkani nesicelo esicacile, nesizethembayo.
Lolu hlobo lwaziwa ukuthi lunempilo kakhulu.
Ngokuya ngocwaningo olwenziwe ngo-2004 , izingqinamba zezempilo ezivame ukubhekana nazo kwakuwumdlavuza nezinkinga zenhliziyo.
Njengezinye izinhlobo ezinkulu, I-Hip ne-Elbow Dysplasia futhi kuyinkinga.
Ngenxa yalokhu, ukucela inani labazali be-hip kunconywa kakhulu ngaphambi kokuthenga umdlwane.
Njengoba lesi kuyisimo sokuthuthuka, esibangelwa ukukhula okungelona kwe-cartilage, ukuxilongwa kuvame ukwenzeka phakathi kwezinyanga eziyi-18 neminyaka emibili.
Inja ye-Anatolian Shepherd iyinzalo enkulu enokuningi ongayinikeza abanikazi abafanele.
Yize zingenzi kahle ezindaweni ezivaliwe nezingane noma ezinye izilwane ezifuywayo zasekhaya, zingaphumelela empilweni yezinkambu ezivulekile nokuphumula.
Le nja imvamisa ithathwa njengeyinselelo ngokuqeqeshwa yingakho inconyelwa kuphela abanikazi abanolwazi.
Lokho kushiwo, i-Anatolian iyinja ezuzisa kakhulu ukuba nayo, ethembekile kulabo ebathandayo nokungabethembi abantu ongabazi ngakho-ke iphelele kunoma ngubani ofuna inja yokuqapha.
Ingabe unayo i-Anatolian enhle ekhaya? Sazise kumazwana abekiwe!
Inja yeRottweiler: Amaqiniso ayi-10 Okufanele Uwazi Ngaphambi Kokuthenga
ingxube ye-lab border collie inkulu kangakanani
blue ekhaleni umgodi lab mix
okumele uyiqambe ngenja emhlophe
uhhafu pit bull uhhafu webhu
kungani inja yami yomile ihamba futhi ivala umlomo
zinesisindo esingakanani izinkabi zomgodi wamakhaza aluhlaza okwesibhakabhaka